लघुकथाको सुगन्ध विमोचित – SidhaRekha
२०७५ मंसिर ९, आईतवार ०८:२८ November 25, 2018
काठमाडौँ । नेपाली लघुकथाको सामूहिक सङ्ग्रह लघुकथाको सुगन्ध कृति शनिबार विमोचन भएको छ । नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च फेसबुक समूहको नाममा सञ्चालन भएको विमोचन समारोहको अध्यक्षता यस मञ्चका एडमिन डा. पुष्करराज भट्टले गर्नुभएको थियो ।
मञ्चका एडमिन उद्दवप्रसाद प्याकुरेलले सञ्चालन गर्नुभएको सो समारोहका अतिथिमा रञ्जुश्री पराजुली, खेमलाल पोखरेल, ध्रुव मधिकर्मी, तुलसीहरि कोइराला, सुमन सौरभ, विधान आचार्य, विमल भौकाजी, प्रा.डा. शैलेन्द्रप्रकाश नेपाल हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई मञ्चका एडमिन घनश्याम डल्लाकोटीले स्वागत गर्नुभएको थियो । तुलसीहरि कोइरालाको कृति समीक्षा, प्रकाशक दिलीप साह, नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
समारोहमा रञ्जुश्री पराजुली, तीर्थराज भट्ट, शुषमा मानन्धर, रमेश भट्टराई पुजारी, उमा सिजापति, सिताराम नेपाल, सुरेश गौतम, जयदेश श्रेष्ठ, निमग्ना घिमिरे, हरि पौडेल, हरिहर दाहाल, मन्दिरा मधुश्री, रामकुमार पण्डित क्षेत्री, टंकबहादुर आले मगर, कात्यायन, हेम पोखरेलले आफ्ना रचना वाचन गर्नुभएको थियो । नमस्ते आधुनिक नेपाली मञ्च नामक फेसबुक समूहमा आबद्ध लघुकथाकारका रचना समेटिएको यस कृतिमा ७४ जना लघुकथा सर्जकका रचना समावेश छन् । यस कृतिको सम्पादकमा डा. पुष्करराज भट्ट, उद्दव प्याकुरेल एवम् घनश्याम डल्लाकोटी सम्पादक रहनभएको छ । कृतिको आवरण टंकबहादुर आले मगरले तयार पार्नुभएको हो ।
अघिल्लोकाममा केन्द्रित र जवाफदेही हुन सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पछिल्लोनिर्मलाका बुुवा यज्ञराज त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना